Iny nivoaka iny ihany koa ny valim-pifidianana solombavambahoaka izay tsy niova firy tamin’ny vokatra vonjimaika, ary didy tsy azo hivalozana ny an’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana. Ireny no vita, saingy tsy azo hodian-tsy hita ny lesoka samihafa hahafahana manitsy ny ho avy, toy ny fifidianana ben’ny tanàna. Mila fanetren-tena sy fifampihainoana ary fitsipi-dalao mazava satria toa hita taratra ihany fa halaim-panahy ireo mahatsiaro ho lasibatra hisaina fa tena misy ny tsindry hazo lena sy ny tsy ara-drariny ary tian-kano sy tsy tian-kano tamin’izao voka-pifidianana izao. Misy ampahana Malagasy tsy faly izany ao, ary tsy vao tamin’ity fifidianana depiote ity fa hatramin’ny teo alohany. Ny hita mibaribary, mampisara-bazana antsika ny politika eto. Ny Barean’i Madagasikara miatrika ny CAN 2019 any Egipta kosa dia tena hanompanan’ny Malagasy manontolo ny fo amam-panahiny, ary mampiombona ny lafivalon’ny Nosy. Ireny hita taratra ireny ny fahavitrihana sy finiavana, ary mbola noporofoin’ny olona izany omaly tamin’ny fahatongavana nilahatra hanao famandrihana mba ho any Egipta. Indrisy anefa fa maro ny ahiahy sy toa fanaovana tsinontsinona ny finiavan’ny maro satria toa efa nandeha ny kiantranoantranon’ny mpitondra. Mila fanovana mba tsy hosimbana ny efa zavatra tsara sy mampiray e !